Wall Street နဲ့ ၀ဲကုတ်ရင်း ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း အင်တာဗျူး (ရုပ်/သံ-သတင်း-ဓါတ်ပုံ)
အနားမယူမီ ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့က နေပြည်တော်တွင်ပြုလုပ်သည့် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ညစာစားပွဲတွင် တွေ့ရသော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ (ဓာတ်ပုံ-AP)
လွန်ခဲ့သည့် ၈ လခန့်က စစ်အစိုးရမှ အရပ်သားအစိုးရသို့ အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်သည့်ကာလတွင် ဦးသန်းရွှေ အနားယူသွားသည်ဟု ဆိုသော်လည်း စစ်ဝတ်စုံဖြင့်
ရိုက်ကူးထားသည့် သူ၏ဓာတ်ပုံများကို မကြာသေးမီ ကာလကအထိ အစိုးရရုံးများတွင် ချိတ်ဆွဲထားဆဲဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။
မူရင်း သတင်း အောက်မှာ ဆက်ဖတ်နိုင်ပါတယ်
NAYPYITAW, Myanmar—Myanmar's government, in the first extended interview withamajor Western news organization in years, called for the U.S. to recognize its recent string of reforms and abandon economic sanctions that is says are hurting its ability to open up further.
conducted by the country's information and culture minister flanked by a
phalanx of advisers and officials, comes as U.S. President Barack Obama
and Asian leaders head to Indonesia forasummit at which Myanmar is seeking to boost its international reputation after decades of tough military rule. Myanmar has embarked on an "irreversible" reform process, said the minister, U Kyaw Hsan, speaking for the government. He blamed U.S. sanctions for delaying the country's development and said they made Myanmar more reliant on Chinese companies. "When we are striving for development, we cannot be choosers—we have accepted what is best for the country," he said.
Since November 2010 elections that Western governments decried asasham, the new government has surprised critics with its changes, which have included freeing dissident and Nobel laureate Aung San Suu Kyi from years of house arrest, as well as easing media reins and pushing to make Myanmar more attractive to foreign investors. A New Day in Myanmar?
'No Intention to Retract' Reforms
"The reforms have been carried out not by one individual person or one group of persons. These are the systematic processes that have been done to establish institutional change based on
the constitution. ... Inanutshell, our reforms, our reform processes are not the superficial reform processes that people are saying." —More from the interview with U Kyaw Hsan
Myanmar has seen political turbulence since its oppressive military regime gained power in 1962.
Mr. Kyaw Hsan chided Western nations for suggesting Myanmar's political system should mirror their own, while hindering its efforts through sanctions. "If we receive international cooperation during this time, we will be able to move forward much faster in our development process and of course this will be of interest to both sides," he said.
U.S. officials—like Ms. Suu Kyi herself—remain hesitant to embrace Myanmar's changes so far as proof of a
permanent shift. Skeptics say the government is trying to con Western leaders into easing sanctions without fundamentally changing the country's political system, which is still dominated by current and former soldiers.
Speaking about Myanmar, also known as Burma, in Australia early Thursday, President Obama said, "Some political prisoners have been released. The government has begunadialogue. Still, violations of human rights persist. So we will continue
to speak clearly about the steps that must be taken for the government of Burma to haveabetter relationship with the United States." Myanmar, was ruled byamilitary junta
for nearly five decades until last year, and living standards in the country of 55 million are among the lowest in Asia. Myanmar's strategic importance has swelled in recent years, in part because of its vast natural resources and its location between Asia's two biggest growth engines, India and China. It has become especially close to China
and has often been described asaclient state, serving asakey new source of energy and other commodities for its larger and more powerful neighbor, with work under way to developamajor pipeline across its land mass to serve Chinese needs.
The reforms that followed last year's elections come justafew years after Myanmar's international standing hit rock bottom, afteraseries of disasters and debacles—includingabrutal 2007 crackdown on monk-led protests and the government's initial refusals to accept some international aid afteradevastating cyclone in
2008—that showed the harsher side of the regime.
The three-hour interview took place Tuesday inameeting hall in the remote government center of Naypyitaw, a
gleaming city of often-deserted eight-lane highways and official buildings set amid rice paddies. The city, which replaced Yangon as Myanmar's capital several years ago and has been largely off-limits to most foreign visitors in recent years, has become widely accessible to outsiders recently: At least one Western tourist was seen Tuesday ambling in shorts towardanew hypermarket—alsoarare sight in Myanmar.
"It would have been inconceivable only
six months ago" foraWestern journalist to have an extended interview in Naypyitaw, said Sean Turnell,aMyanmar expert at Macquarie University in Sydney. "They seem to have discovered that having international legitimacy is important to them," he said.
There are still plenty of critics. They note that reports of human-rights violations have continued this year, even after the government set upanew commission to investigate them, especially in areas controlled by ethnic-minority insurgent groups. Mr. Kyaw Hsan said the ethnic insurgents are the ones committing
atrocities.Mr. Kyaw Hsan said the decision over whether to release more
political prisoners was up to the country's president, Thein Sein. As for sanctions, Mr. Kyaw Hsan said they "are based on one-sided allegations" and are "having adverse effects on the majority of Myanmar people." With the latest changes in Myanmar, "today is the best time and
opportunity for the international community to show their cooperation in the Myanmar reform process" and start easing the sanctions, which he said have forced more than 150 companies that once operated in the country to leave.
Much watched for her reaction, Ms. Suu Kyi has welcomed recent reforms but has not yet advocated lifting sanctions.
But even some of the harshest critics concede they see progress—including that the government is now willing to discuss its performance with foreign journalists. Mr. Kyaw Hsan insisted there were no systematic human-rights abuses, despite repeated assertions by officials
from the United Nations and other international groups that they are widespread. Although "there may be some violations of law from time to time" in Myanmar's military, any cases that arise are investigated and punished, he said. Reports of human-rights violations have continued this year, even after the government set upanew commission to investigate them, especially in areas controlled by ethnic-minority insurgent groups.
There's "a culture of abuse within the
military, and Kyaw Hsan should know that," said David Mathieson,aMyanmar expert at Human Rights Watch in Thailand. Even so, he said the latest reforms couldn't be summarily dismissed. "The changes are too sweeping."
— Keith Johnson and Celine Fernandez contributed to this article.
စစ်သချိုင်းမှာ ဗြိတိသျှဝန်ကြီး သတင်းစာလင်းပွဲပြုလုပ် (ဓါတ်ပုံ)
ဗြိတိသျှ ပါလီမန် အမတ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာန ဝန်ကြီး H. E. Mr Andrew John Bower Mitchell နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ်ရှိ ဓနသဟာယ စစ်သချိုင်းသို့ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီကျော်ခန့်က လာရောက် ဂါရဝပြုပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရစဉ်။ အဆိုပါ ဝန်ကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သမိုင်းဝင် ခရီးစဉ် အဖြစ် ဒုတိယအကြိမ် လာရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
11/17/2011 09:12:00 PM
ပြည်သူကိုချစ်တဲ့ လေးစားတဲ့ အမေစု - အမေ့အိမ် နဲ့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီး (ရုပ်/သံ)
11/17/2011 07:39:00 PM
ဖွားဖွားစုကိုချစ်တယ် ဖွားဖွားစုကျန်းမာပါစေ-အမေ့အိမ် နဲ့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီး (ဓါတ်ပုံ)
11/17/2011 07:17:00 PM
နေပူထဲမှာစောင့်နေတဲ့ လူအုပ်ကြီး ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းခြွေ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ''နေပူထဲမှာ အကြာကြီး စောင့်နေရတဲ့အတွက် အားနာပါတယ်။ တောင်းပန်ပါတယ်။ အထဲမှာ ပြောစရာတွေက မပြီးသေးလို့ပါ။ ပထမဆုံးအားဖြင့် ကျွန်မတို့ကို ဒီလိုလာပြီးတော့ အားပေးတဲ့ အတွက် အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့လုပ် ရတဲ့ အလုပ်တွေက ပြည်သူတွေကို အားကိုးပြီး လုပ်နေရတဲ့အလုပ်ပါ။ အခုဒီမှာ အမေ့အိမ်ကျောင်းဆောက်တယ်ဆိုတာ ဒီကျောင်းဟာ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ် အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေ ပညာတတ်မှ နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ် ကောင်းမွန်လာမှာပါ။ ကျွန်မတို့ ကလေးတွေကို ပညာသင်ပေးတယ်။
ပညာသင်ပေးတဲ့အခါကျရင် ကလေးတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ပညာသင်ပေးစေချင် တယ်။ ဒါမှ ပညာသင်ရတာပျော်မှ သူတို့ ပညာရမှာ။ ကျွန်မတို့ အမေ့အိမ်ကလေးကို ဖြစ်မြောက်အောင်လို့ ကူညီပေးတဲ့ ရပ်သူရပ်သားအားလုံးကို ကျွန်မတို့ အင်မတန်မှ ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။ ကလေးတွေကိုယ်စား သာမက ကျွန်မတို့နိုင်ငံကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ဒီဖက်ကို လာမယ်လာမယ်နဲ့ မရောက်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီကို မရောက်တာ တော်တော်ကြာသွားပြီ။ ၁၀ နှစ်
လောက်ကတော့ တစ်ခါရောက်ဖူးပါတယ်။ ဒီ ၁၀ နှစ်အတွင်းမှာ လူတွေလည်း အတော်များလာသလိုပဲ။
နောက် ၁၀ နှစ်မှာ ဘယ်လောက်တောင် များလာမလဲမသိဘူး။ ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေကို အရေအတွက်ထက် အရည်အချင်းပါ တိုးတက်စေ ချင်တယ်။ အရည်အချင်းပါ တိုးတက်ဖို့ဟာ ပညာရေးနဲ့ စရမှာပဲဆိုပြီးတော့ ကျွန်မတို့ စလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တခြားကိစ္စတွေအတွက်လည်း ကျွန်မတို့ အများကြီး စဉ်းစားနေပါတယ်။ အခု ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပပျောက် ရေးအတွက် ဘယ်လို ကြိုးစားရမလဲ။ အထူးသဖြင့် လက်လုပ်လက်စားလုပ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ဘ၀ကို တိုးတက်အောင်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲလို့ ကျွန်မတို့ လက်တွေ့ကျကျ စဉ်းစားပြီးတော့ ကူညီနိုင်မယ့် အဖွဲ့ အစည်းများ၊ ကူညီနိုင်မယ့်
အလှူရှင်များကို ကျွန်မတို့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကို အကြံဉာဏ်ပေးစရာ များရှိရင် ပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ချင်း တစ်ယောက်ချင်းလာပြီးတော့ ပြောဖို့ခက်တယ် ဆိုပြီးတော့ ကျွန်မနားလည်ပါတယ်။ စုပြီးတော့ ကျွန်မတို့ကို ပေးချင်တဲ့အကြံဥာဏ်များကို ရေးပြီးတော့ ကျွန်မတို့ရုံးကတစ်ဆင့် ပေးလည်းရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဒီကျောင်းဆရာတွေက တစ်ဆင့်
ရေးပို့ရင် ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဘာရှိသလဲဆိုတာကို ပြောမှပဲ တစ်ခါတစ်လေ သိတဲ့အဆင့်မှာ ရှိပါတယ်။ တချို့ကိစ္စတွေ မှာ မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့ရတော့ ဘယ်သူမှ ပြောပြဖို့ မလိုဘူးပေါ့။ တချို့ကိစ္စတွေကျတော့ ထင်ထင်ရှားရှား မရှိတဲ့အခါကျတော့ ကျွန်မတို့တွေအတွက် အသိပေးမှ သိမှာပါ။
ကျွန်မတို့တွေ နောက်ကြလို့ရှိရင်လည်း သက်သက်ပြန်ပြီး လာဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်။ တကယ်ကတော့ အမှန်ပြောရရင် ဒီနေ့က ပြည်သူတွေကို တွေ့ဖို့လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျောင်းကိုလာပြီးတော့ ဗြိတိန်နိုင်ငံက လာတဲ့ ၀န်ကြီးကို ကျောင်းကို ပြဖို့လာတာပါ။ ၀န်ကြီးက ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဆိုတော့
ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးမှု အကူအညီတွေ လိုနေလဲလို့ ဆိုတာကို မြင်အောင်လို့ တွေ့အောင်လို့။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကျောင်းတွေဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ တည်ထောင်ထားတဲ့ ကျောင်းတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို လည်း မြင်အောင်လို့ ၊တွေ့အောင်လို့ ကျွန်မတို့ ခေါ်လာတာပါ။
ကျွန်မတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာ ဆိုလို့ရှိရင် ပြည်သူတွေအားလုံးအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးစနစ်တစ်ခု ရှိစေချင်တယ်။ မိဘတွေရော၊ ကျောင်းသားတွေရော စိတ်ချမ်းသာစေမယ့် ပညာရေးစနစ် တစ်ခုကို ကျွန်မတို့ ထူထောင်ချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ တစ်တိုင်းပြည်လုံးအတွက်
မလုပ်နိုင်သေးပေမယ့် ကျွန်မတို့ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လုပ်နေတာပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီလိုတစ်နိုင်တစ်ပိုင် လုပ်နေတဲ့နေရာမှာ အားတင်းဖို့လိုပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ တစ်ကယ့်အင်အားတွေ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီး ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား၊ လူငယ်တွေကို အားပေးစကားလေးနဲ့ နိဂုံးချုပ်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ဟာ ဒီကျောင်းသူကျောင်းသား၊ လူငယ်လေးတွေရဲ့ လက်ထဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုနက ကလေးလေးတွေနဲ့ စကားပြောကြည့်တယ်။ ဘာလုပ်ချင်တာလည်းဆိုတော့ ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တဲ့သူနဲ့။ သင်္ဘောသားဖြစ်ချင်တဲ့သူနဲ့။ ဆရာမကြီး လုပ်ချင်တဲ့သူနဲ့။ နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်တဲ့သူနဲ့။ အမျိုးမျိုး ပေါ့နော်။ ကျွန်မက ပြောတယ်။ ဘာပဲလုပ်လုပ် ဆရာဝန်ပဲလုပ်လုပ်၊ သင်္ဘောသားပဲလုပ်လုပ်၊ နောက်ဆုံးကျတော့ နိုင်ငံရေးကို အခြေခံအားဖြင့် နားလည်ဖို့ လိုတယ်။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပြည်သူပြည်သားရေးဟာ နားလည်မှ ဒီနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ကို ကိုယ်ဖြစ်ချင်သလို ကိုယ်တည်ဆောက်လို့ရမှာ။ ကိုယ်က နိုင်ငံရေးကို နားမလည်သလို ရှိလို့ရှိရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့နိုင်ငံရေးကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာကို နားလည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်မတို့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို အားလုံးကို ပညာသင်ပေးတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဘာလဲ၊ နိုင်ငံဆိုတာ ဘာလဲ၊ နိုင်ငံသူနိုင်ငံ သားများရဲ့တာဝန် ဘာလဲဆိုတာကို တစ်ခါတည်း ကျွန်မတို့ သင်ပေးနိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများမှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ ကို မမေ့စေချင်ပါဘူး။ အစိုးရမှာလည်း တာဝန်ရှိသလို နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်။ ကျွန်မတို့ ဒီမိုကရေစီစနစ် လိုချင်တယ်လို့ ပြောနေတာဟာ အဲဒီစနစ်အောက်မှာဆိုရင် နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေဟာ အစိုးရကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အစိုးရကို ပြည်သူတွေက ရွေးချယ်နိုင်ရမယ်။ ဒါကို ကျွန်မတို့
ဦးတည်တာပါ။ အားလုံး စဉ်းစားရင် သိမှာပါ။ လူတိုင်းကတော့ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်လုပ်ချင်ကြတာပဲ။ ပြီးတော့ ပြည်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ့် အစိုးရဆိုတာ ပြည်သူတွေရဲ့ သြဇာအာဏာအောက်မှာရှိတဲ့ အစိုးရပဲ ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာကို အားလုံးကို နားလည်စေချင်တယ်။
11/17/2011 05:57:00 PM
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် အိမ်သာထဲမှာပိတ်မိ
ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် ကို အိမ်သာဝ မှာစောင့်နေတဲ့ သတင်းထောက်များ
နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးကို မေးမြန်းရန် သန့်စင်ခန်း အထွက်တွင် စောင့်နေသာ မြန်မာနှင့် နိုင်ငံတကာ သတင်းသမားများ။ မြန်မာကို ၂၀၁၄ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးပေးရန် အာဆီယံ ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီ (ACC) တွင် ယနေ့ တရားဝင် ဆွေးနွေးလျက် ရှိပြီး ညနေပိုင်း အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးချိန်တွင် တရားဝင် ထောက်ခံမှု ပေးမည် ဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်နေချိန် သန့်စင်ခန်းသို့ ခေတ္တ သွားချိန်တွင် ဝန်ကြီးကို မေးမြန်းရန် ကြိုးစားခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် The Voice Weekly (Facebook)
မြန်မာအားကစားအဖွဲ့ ဒုတိယမြောက် ရွှေတံဆိပ်ရရှိ
၂၀၁၁ ဆီးဂိမ်းတွင် မြန်မာအားကစားအဖွဲ့
ဒုတိယမြောက် ရွှေတံဆိပ်ရရှိ ~ လှေလှော်ပြိုင်ပွဲတွင် သန်းသန်းနွယ် - ဆွေဇင်လတ် နှစ်ယောက်တွဲက ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအလိုက်ရရှိထားတဲ့ ဆု များ
no country sum
1INA90 68 72 230 2VIE61 58 61 180 3THA54 46 60 160 4MAS30 25 45 100 5SIN29 32 49 110 6PHI15 31 35 81 7LAO5321 29 8CAM3911 23 9MYA2 13 16 31 10BRU0 167 11TLS001 1 TOTAL 289 286 377 952 နိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံး ရွှေတံဆိပ် ရယူပေးခဲ့သည့် မြားပစ်မယ် အောင်ငှိမ်းနှင့် တစ်ခဏတာ နိုဝင်ဘာ (၁၆)ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ အမျိုသမီး
တစ်ဦးချင်း မြားပစ်ပြိုင်ပွဲ compound အမျိုးအစားမှာ တိုင်းပြည် အတွက်ရော
မြန်မာမြားပစ် အဖွဲ့အတွက်ပါ ပထမဆုံး ရွှေတံဆိပ် ရယူပေးခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး မြားပစ်မယ် အောင်ငှိမ်းကို ဆုတံဆိပ် ရယူပြီး မကြာမီမှာ ပဲတွေ့ဆုံမေးမြန်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမ အနေနဲ့လည်း စိတ်လှုပ်ရှား နေလိမ့်မယ် ဆိုတာ သူ့အဖြေတွေက သက်သေပြ နေပါရဲ့။
မေး - တိုင်းပြည်အတွက် ပထမဆုံး ရွှေတံဆိပ် ရယူပေးနိုင်တဲ့ အတွက် ဘယ်လို ခံစားမိသလဲ။
ဖြေ - ပြောမပြ တတ်အောင်ပါပဲ။ အရမ်း စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။ ၀မ်းလည်း သာပါတယ်။
မေး - ပွဲသိမ်းပစ်ချက် လွဲသွားတာက စိတ်လှုပ်ရှားနေလို့လား။ နောက်ဆုံး (၁၆)ချောင်း မြောက်မှပဲ အနိုင်ရခဲ့တာ ဆိုတော့..
ဖြေ - ဟုတ်ပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှား နေတာလည်း ပါတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ပြန်ထိန်းပြီး ကစားနိုင် လိုက်ပါတယ်။
မေး - တစ်ရက်ကို ဘယ်လောက်များ လေ့ကျင့်ခဲ့ပါသလဲ။
ဖြေ - ၅ နာရီပါ။
မေး - ဒီနေ့ ဗိုလ်လုပွဲ အကြောင်း နည်းနည်းပြောပါဦး။
- ဖိလစ်ပိုင်က ကစားသမား တော်တော် ကောင်းပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့ ပြိုင်ဘက်ပါ။ နောက်ဆုံး အချိန်ထိ အကြိတ်အနယ် ကစားရတာ အားလုံး မြင်ကြတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။
မေး - ထင်ရှား ကျော်ကြားတဲ့ အားကစားသမား ဖြစ်ချင်ပါသလား
ဖြေ - ဟုတ်
မေး - တိုင်းပြည်ကို ဘာများ ပြောချင်ပါသလဲ
ဖြေ - ရွှေတံဆိပ်ဆု ယူပေးနိုင်လို့ ကျေနပ်ပါတယ်။ နောင်ပြိုင်ပွဲ တွေမှာလည်း ဆက်ကြိုးစား သွားပါမယ်လို့။
ပထမဆုံး ရွှေတံဆိပ်ဆုနှင့် အတူ တွေ့ရသည့် အောင်ငှိမ်း
နာမည်ကျော် ESPN News မီဒီယာကလည်း အင်တာဗျူးခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းမှ MRTV4နှင့် အားကစား မီဒီယာ အချို့လည်း မေးမြန်းခဲ့ကြသည်။)
11/17/2011 11:50:00 AM
မူကြို ဆရာ/ဆရာမ ပညာအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်အချို့ လျော့ပေါ့
မူကြို ကျောင်းသားနဲ့ ဆရာမများ (ဓါတ်ပုံ-Google Images)
လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ကြီးမှူးဖွင့်လှစ်သည့် ကလေးသူငယ် ရှေးဦးပြုစုပျိုးထောင် ရေးမူကြိုဆရာ/ဆရာမအခြေခံသင်တန်း၊သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃၄) ကို နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် စတင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် စီစဉ်လျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အဆိုပါသင်တန်းကို အမှတ် (၆၅)ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း မရမ်းကုန်းမြို့နယ် လူမှုဝန်ထမ်းအတတ် သင်သိပ္ပံကျောင်း၌ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းသားဦးရေ(၆၀)ဦး သတ်မှတ်ထားခြင်းကြောင့် သင်တန်းသားများကို ဦးရာ လူစနစ်ဖြင့်သာ လက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အသက်(၁၈)နှစ်နှင့်အထက် စိတ်ဝင်စားသူ မည်သူမဆိုတက် ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ၊ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူတို့နှင့်အတူ လာရောက် လျောက်ထားနိုင်မည် ဖြစ်ကာ သင်တန်းကြေးကျပ် သုံး သောင်းငါးထောင်သတ်မှတ်ထား ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
''အတန်းပညာအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်က ဘွဲ့ရဆိုပေမယ့် လည်းဝေးလံတဲ့ဒေသကနေမိမိရပ်ရွာ အကျိုးသယ်ပိုးချင်လို့သင်တန်းလာ တက်ချင်တဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေ ကိုတော့ ပညာအရည်အချင်းသတ် မှတ်ချက် ကိုသတ်မှတ်ထားချက်ထက် လျော့ပေါ့စဉ်းစားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အနိမ့်ဆုံးပညာအရည် အချင်းကတော့ (၁၀)တန်းအောင် အဆင့်ဖြစ်ရပါမယ်''ဟုလူမှုဝန်ထမ်း အတတ်သင်သိပ္ပံကျောင်းမှတာဝန် ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါကလေးသူငယ်ရှေးဦး ပြုစုပျိုးထောင်ရေး မူကြိုဆရာ/ ဆရာမအခြေခံသင်တန်းကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေး ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁) မှအမှတ်စဉ်(၃၃)အထိသင်တန်းဆင်း မူကြိုဆရာ/ဆရာမပေါင်း(၂၀၃၂)ဦး ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် "နေခြည်မှာ ရွှေရည်လောင်း၊ ငါတို့စာသင်ကျောင်း" ဟု မကြွေးကြော်နိုင်ကြသေးသည့် ဘုန်းတော်ကြီးသင် အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းပေါင်း များစွာ ရှိနေပါသည်။
နေခြည်မှာ ရွှေရည်မလောင်းနိုင်ကြရုံသာမက နေခြည်ထိုးမှာပင် စိုးထင့်နေကြရပါသည်။ သက် ကယ်မိုးပင် မလုံသော စာသင်ခန်းငယ်များကြောင့် နွေအခါ နေပူထိုးမှာ၊ မိုးအခါ မိုးယိုမှာကို စိုးထိတ်စွာနှင့်ပင် ကျွန်တော်တို့၏ ကလေးငယ်များ၊ နိုင်ငံတော်၏ အနာဂတ်ပန်းလေးများစာသင်ကြားလျက်
ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်း ရောက်ဖူးခဲ့သမျှ၊ မြင်ဖူးခဲ့သမျှ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာသင်ကျောင်းများအနက် နေရာထိုင်ခင်း အချို့တဲ့ဆုံး၊ ကူညီလှူဒါန်းနိုင်မည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ အရေးတကြီး အလိုအပ်ဆုံးဟု ဆိုရမည့် စာသင်ကျောင်းငယ်တစ်ခုကို ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က ကျွန်တော်တို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါသည်။
ဘုန်းတော်ကြီးများ တည်ထောင်သည့်စာသင်ကျောင်းများပင် အခက်အခဲကြားက ရုန်းကန်နေရသည့် အနေအထားတွင် မယ်သီလရှင်ဆရာကြီးများ တည်ထောင်သည့် စာသင်ကျောင်းများသည် ပို၍ပို၍ပင် အခက်အခဲကြားမှ ရုန်းကန်၍ စာသင်ကြားပေးနေရရှာပါသည်။
ကျွန်တော်ရောက်ရှိသွားခဲ့သည့် ဒဂုံအရှေ့ပိုင်း မြို့နယ်ရှိ "ချမ်းသာအောင် ပရဟိတ" သီလရှင်သင် ပညာရေးကျောင်းကို တည်ထောင်သူ သီလရှင်ဆရာကြီးသည် အကျပ်အတည်း အမျိုးမျိုးကြားမှ ယိုင်နဲ့နဲ့ ရှင်သန်လာခဲ့သည့် စာသင်ကျောင်းလေး အကြောင်းကို မျက်ရည်တွေကြားမှ ပြောပြခဲ့ပါသည်။
ဆရာကြီးဒေါ်သုဝဏ္ဏဉာဏီမှာ သက်တော် (၅၀)ကျော်ခန့် ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး မူလပထမတွင် စာသင်ကျောင်းတစ်ခု ဖွင့်ရန် ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲ မဖြစ်မနေ ဖွင့်ရတော့မည့် အခြေအနေကြောင့် ဖွင့်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ပြောပြနေခဲ့ပါသည်။
တောင်ပေါ်မှ ရောက်လာသော မိဘမဲ့ ရှမ်းလေးတွေ၊ ပလောင်လေးတွေအား မဖြစ်မနေ စာသင်ကြား ပေးရမည် ဖြစ်သောကြောင့် ရှိသမျှ ဇွဲ၊ အားမာန်လေးဖြင့် စာသင်ကျောင်းလေးကို ၂၀၀၂တွင် စတင် ဖွင့်လှစ် ခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၀၃ခုနှစ်တွင် အနီးရှိရပ်ကွက်အတွင်းမှ ကျောင်းသားများကိုလည်း စတင်လက်ခံကာ ပညာသင်ကြားပေးခဲ့ပြန်ပါသည်။
'ချမ်းသာအောင်ပရဟိတ' ကျောင်းသို့ ကျောင်းတက်လာကြသော ကလေးငယ်များ
ရန်ကုန်နှင့် နီးကပ်လှစွာသော ဒဂုံအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်အတွင်းတွင် ကျောင်းသက်တမ်း ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကို ချဉ်းကပ်လာပြီဖြစ်သည့် ဤစာသင်ကျောင်းငယ်သည် မည်သည့်အကူအညီမှ မရရှိဘဲ ယိုင်နဲ့နဲ့တဲငယ်လေးနှင့် စာသင်ကြားနေရဆဲ ရှိနေသည်မှာ အံ့သြစရာကောင်းလှပါသည်။
ကျွန်တော်တို့အားလည်း ထိတ်လန့်မိစေပါသည်။ ထိုနယ်မြေသည် တရားဝင်စာရင်းအရ သီလ ရှင်ကျောင်း (၁၃) ကျောင်းနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၂၇) ကျောင်း စုစုပေါင်းကျောင်းပေါင်း (၄၀) ရှိ၍ အစိုးရက သတ်မှတ်ပေးထားသော သာသနာ့နယ်မြေ ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် အဆောက်အဦး ကောင်းကောင်း ဘုန်းကြီးကျောင်းဆို၍ တစ်ကျောင်းမှ မတွေ့ခဲ့ရပါ။ ရှေ့တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း ဆိုင်းဘုတ် လေးတပ်ထား၍ နောက်တွင်တဲလေးတစ်လုံးသာရှိပြီး သံဃာတော်များ သီတင်းသုံးနေ၍သာ ကျွန်တော့်မှာ ဘုန်ကြီးကျောင်းဟု ယုံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သဒ္ဓါတရားထက်သန်လှပါသည်ဆိုသည့် ကျွန်တော်တို့လူမျိုးများသည် ဤသာသနာ့နယ်မြေကို မေ့လျော့နေကြပါသလား။ ဘုန်တော်ကြီး ၃-၄ ကျောင်းလောက်သာ တွေ့ခဲ့ရမည်ဆိုပါက ကျွန်တော် အံ့သြမိမည်မဟုတ်ပါ။ ယခုတော့ သာသနာ့ နယ်မြေအတွင်း ကျောင်းပေါင်း (၄၀)သည် တဲငယ်လေးများဖြင့် ကျောင်းလုပ်နေရသော သာသနာ့ နယ်မြေတစ်ခုအား မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်လိုက်ရ၍ဖြစ်ပေသည်။
ရသမျှဖြင့် မိုးကာရံထားရသော ဘုန်းဘုန်းတို့ကျောင်း
သာသနာ့နယ်မြေသို့ ၀င်ရာ ပေ ၂၅၀၀ ကျော်ရှိသည့် လမ်းမှာလည်း ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ လုပ်အားဖြင့် လမ်းဖို့ထား၍သာ သွားနိုင်၊ လာနိုင်ရုံ ဖြစ်နေသည့် လမ်းဖြစ်ရုံလမ်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသာသနာ့နယ်မြေဘေးရှိ ရပ်ကွက်မှာလည်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများအား လှူနိုင်ဖို့ နေနေသာ၊ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်တောင်မှ အသက်ရှင်ရန် အနိုင်နိုင် ကြိုးစားနေရရှာသည့် ပျံကျရပ်ကွက် ဖြစ်ပါသည်။
အိမ်ထောင်စု (၇၀၀) နီးပါခန့်ရှိပြီး အများစုမှာ ပန်းရန်အလုပ်သမား၊ ရွာသာကြီး ၀က်သတ်ရုံ အလုပ်သမားစသည်ဖြင့် ကြုံရာကျပန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရသည့် အလုပ်သမားများပင်။ သာသနာ့နယ်မြေအနီးရှိ ဒဂုံအရှေ့ပိုင်း (၁၅၅) ရပ်ကွက်မှာ ပီနံ အိတ်ကလေးများကာ၊ ပီနံအိတ်ကလေးများ မိုးထားသည့် တဲငယ် ပေါင်းများစွာရှိသော ရပ်ကွက်တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာကြီး၏ စာသင်ကျောင်းငယ်မှာ ထိုရပ်ကွက်ငယ် အတွင်းမှ ကျောင်းသားပေါင်း (၂၀၀) ကျော်ကိုပါ ခေါ်ယူသင်ကြား ပေးနေခဲ့ရပါသည်။ ယမန်နှစ်ဆီကမှ ရပ်ကွက်အတွင်း အစိုးရ မူလတန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ်လာ၍ မိစုံဖစုံကျောင်းသားများကို အစိုးရ မူလတန်းကျောင်းသို့ တက်စေပြီး၊ ဆရာကြီးကျောင်းတွင် လက်မခံပါက မည်သည့်ကျောင်းမှ တတ်နိုင်မည်မဟုတ်သော အဆင်းရဲ ဆုံး ကျောင်းသားများကိုသာ ယခုနှစ်တွင် လက်ခံသင်ကြားပေး နေရှာပါသည်။
ဒါတောင်မှ ကျောင်းသားပေါင်းမှာ (၇၀)ကျော် ရှိနေပါသည်။
ဆရာကြီး၏ အပြင်ထန်ဆုံး သောကမှာ "နောင်နှစ်၊ နောင်နှစ်များတွင် စာသင်ကျောင်းလေးအား ဆက်ဖွင့်နိုင်အောင် ငွေရှိနိုင်ပါ့မလား"
ဆိုသည့် သောကဖြစ်ပါသည်။ "ကျောင်းအိပ် ကျောင်းစား ကလေး (၄၀) ခန့်၏ စာရေးသောက်ရေးကို ဆရာကြီး ဘယ်လိုဖြေရှင်းနေခဲ့ပါသလဲ" ဆိုသည့် ကျွန်တော်တို့၏မေးခွန်းကို မဖြေခင် ဆရာကြီးမှာ စီးကျလာခဲ့သည့် မျက်ရည်များကို ကိုယ်ရုံစ ဖြင့် အရင်သုတ်နေခဲ့ရပါသည်။
ဆရာကြီး ပြောပြခဲ့သည်မှာ- ပိုက်ဆံ အရမ်းအခက်အခဲဖြစ်လာသည့်အခါ ငယ်ဆရာတော်ကြီးများထံ သွားရကြောင်း၊ ဆရာတော်ကြီးများမှာလည်း သူတို့ကိုယ်ပိုင် ဘ/ကကျောင်းလေးများကို ရုန်းကန်နေရသည့်ကြားက ရှိသမျှလေးများ ထုတ်ပေးရှာကြောင်း၊ တမန်နှစ်ဆီကတော့ ဆရာ လေး၏ ဇာတိရွာသို့ပြန်ပြီး မယ်တော့်ဆီက ယာလေး၊ ကိုင်းလေး များ အလှူခံကာ ရောင်းချပြီး အသက်ဆက်ခဲ့ရကြောင်း ပြောပြ နေခဲ့ပါသည်။
စားရေးသောက်ရေးကိစ္စအတွက် အဓိကဖြေရှင်းရပုံ မှာ ကျောင်းတွင်ရှိသောဆရာကြီး
(၁၃) ပါး ဆွမ်းခံရပ်၍ ရလာသည့် ဆွမ်းဆန်လေးများဖြင့် မျှတအောင် ကြိုးစား၍ ဖြေရှင်းရကြောင်း သိရပါသည်။
ဆရာကြီးမှာ "ပဲနီလေး၊ ကုလားပဲခွဲခြမ်းလေးများ များများစားနိုင်ရင် တော်တော်အဆင်ပြေနေပါပြီ" ဆိုသော အပြောတွင် ကျွန်တော်တို့ရင်တစ်ခုလုံးကို ဟာလာဟင်းလင်း ဖြစ် စေခဲ့ပါသည်။
ဆရာကြီး၏စာသင်ကျောင်းသို့ သွားရာလမ်းမှာလည်း ရွှံ့ဗွက်များကြားထဲတွင် သဲအိတ်လေးများ ချထား၍သာ သွားနိုင်သော လမ်းသာသာလမ်းလေး ဖြစ်ပါသည်။ ကျွတ်များ၊ မျှော့များ ကြားမှဖြတ်၍ ကလေးငယ်လေးများ စာသင်ရန် ကျောင်းသို့ လာရပါသည်။ စာသင်ခန်းငယ်မှာလည်း အမိုးကမလုံ၊ အကာက ပေါက်နေရုံသာမက မိုးများလျှင် ရေတက်လာသည့် စာသင်ခန်း ငယ်ဖြစ်ပါသည်။
အလှူရှင်ခေါင်းပါးလွန်းလှသည့် စာသင်ကျောင်းငယ်သို့ ကျွန်တော်တို့ ရောက်ရှိသွားသည့်အခါ ဆရာကြီးမှာ ရှား ပါးဧည်သည်တို့ကို ၀မ်းသာအားရ ကြိုဆိုခဲ့ရှာပါသည်။ ဆရာကြီး ကျောင်း၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေသော အရာများမှာ ကလေးငယ်များ ၏ စား၊ ၀တ်၊ နေ၊ သင်ရေး လေးပါးလုံးပင် ဖြစ်ပါသည်။
တစ်နေ့တွင် ပညာတတ်ကြီးများဖြစ်ချင်ရှာသည့်သားငယ်၊ သမီးငယ်များမှာ ရွှံဗွက်များကြားက လမ်းအား ဖြတ်သန်း၍ အမိုးအကာမလုံသည့် စာသင်ကျောင်းငယ်တွင် ကြိုးစား၍ ပညာသင်ကြားလျှက်ပင် ရှိနေကြပါသည်။
ရောက်လာနိုင်ပါ့မလားရယ်လို့ မျှော်တလင့်လင့်ဖြင့် စိုးထိတ်နေကြရဆဲပင် ရှိနေရှာပါတော့သည်....။
သားငယ်လေးကကော ဘာတွေ စဉ်းစားနေတာလဲ?
"ချမ်းသာအောင်ပရဟိတ" သီလရှင်သင် ပညာရေးကျောင်း
တည်နေရာ ။ ။ "ချမ်းသာအောင်ပရဟိတ" သီလရှင်သင် ပညာရေးကျောင်း၊ (၁၅၅)ရပ်ကွက်၊ သာသနာ့နယ်မြေ။ ဒဂုံအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။
ကျောင်းသားဦးရေ ။ ။ (၇၀)ခန့်။
ဆရာအင်အား ။ ။ (၃)ယောက်။
ကျောင်းအမျိုးအစား ။ ။ သီလရှင်သင် မူလတန်းကျောင်း။
ပထမဦးစားပေး - ကလေးငယ်များ၏ စား၊ ၀တ်၊ နေရေး ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ရန်။
ဒုတိယဦးစားပေး- ဆရာတော်ကျောင်းမှ စာသင်ကျောင်းသို့လာရာ ပေ(၆၀၀)ရှည် ရွှံ့ဗွက်လမ်းအား ခြောက်ခြောက်သွေ့သွေ့ လမ်းငယ်တစ်ခုဖြစ်လာစေရန်(လမ်းရှိဝါးတံတားငယ်တစ်ခုပြုပြင်ရန်အပါအ၀င်)။
တတိယဦးစားပေး - စာသင်ကျောင်းအဆောက်အဦးပြုပြင်ရန်။
စတုတ္ထဦးစားပေး - သာသနာ့နယ်မြေသို့ဝင်ရာ ပေ၂၅၀၀ ရှိလမ်းမအား ပြုပြင်ရန်။
ပဉ္စမဦးစားပေး - စာသင်ကျောင်းတစ်ခုအဖြစ် ပီပြင်လာစေနိုင်မည့် အကူအညီများ အားလုံး။
သောက်သုံးရေမှာ မိုးတွင်းတွင် မိုးရေရရှိ၍ အဆင်ပြေ သော်လည်း မိုးပြတ်လပ်ချိန်တွင် အ၀ီစိတွင်းရေမှာ ပြာနှမ်းနှမ်းဖြင့် သောက်သုံးရန် မသင့်တော်ပါ။
ကလေးငယ်များ ဖျားနာလျှင် ပြသရန်မှာ (၁၅၅)ရပ်ကွက်အ တွင်းရှိ အစိုးရက တစ်ပတ် ၂ ရက် လာဖွင့်ပေးထားသော ဆေးခန်း တစ်ခုသာရှိပါသည်။ ရပ်ကွက်တွင်းတွင် အမြဲတမ်းပုံမှန် ကျန်မာရေး သူနာပြု ဆရာမ မရှိပါ။ ဆေးခန်းမဖွင့်သည့်ရက်တွင် ကလေးငယ်များ ဖျားနာပါက ရှိသည့်ဆေးဝါးများဖြင့်သာ ကုသရပါသည်။ အနီးဆုံး ဆေးရုံမှာ လိုင်းကားဖြင့် တစ်နာရီကျော်သွားရသည့် (၇/၈)လမ်းဆုံရှိ ဒဂုံအရှေ့ပိုင်းဆေးရုံဖြစ်ပါသည်။
သီလရှင်ဆရာကြီးများ ဆွမ်းခံရပ်၍ရလာသော ဆွမ်းဆန် လေးများကိုသာ အဓိက မှိခိုနေရပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် ငါးပိနှင့် ပဲနီ လေး၊ ကုလားပဲခြမ်းများကိုသာ ဟင်းအဖြစ်စားသောက်ကြရပါသည်။
မူလတန်းပြီးဆုံးခဲ့သည့်တိုင် အလယ်တန်းပညာ သင်ကြား နိုင်မည့်အရေးမှာ ခက်ခဲလွန်းလှပါသည်။
11/17/2011 10:35:00 AM
မရင်ငြိမ်းပွင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ တိုက်ပေါ်မှခုန်ချ သတ်သေ
တုန်လှုပ်ဖွယ်သတင်းသည် Facebook အပါအဝင် လူမှုရေးကွန်ယက်များမှတဆင့် အလျင်အမြန် ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး လူအများ အနေဖြင့် အကြီးအကျယ် အံ့အားသင့်သွားခဲ့ရသည်။ သူမ၏ Facebook ပေါ်တွင်လည်း "I Miss Being Happy" ဆိုသည့် စကားလုံးအား ပုံဖော်ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ သူမအနေဖြင့်
မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သွားခဲ့ရခြင်းမှာ သူမ၏ချစ်သူဖြစ်သူနှင့် ပြတ်သွားခဲ့ရခြင်းကြောင့်ဟု ယူဆရပြီး သေဆုံးချိန် တွင် သူမ၏ချစ်သူဟောင်းဖြစ်သူ၏ နာမည်အား ရင်ဘတ်ပေါ်တွင် tattoo ထိုးထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ထိုနည်းတူ ရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် “Dear, why are you so cruel?” ဟု ရေးသားထားသည့် သူမနှင့် သူမ၏ချစ်သူဟောင်းတို့ အတူတွဲရိုက် ထားသော ဓာတ်ပုံအားလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မိမိကိုယ်ကို အဆုံးမစီရင်မီ facebook ပေါ်၌ “Please take care of my boyfriend” ဟု အမည်ပေးထား သည့် နောက်ဆုံးမှတ်တမ်း တစ်ခုအားလည်း ရေးသားထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ မှတ်တမ်းသည် သူမချစ်သူဟောင်း၏ ရည်းစားသစ်ဖြစ် ဖွယ်ရှိသော မိန်းကလေးတစ်ဦးအား ရည်ညွှန်းပြီး ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ မရင်ငြိမ်းပွင့်သည်
အဆိုပါတိုက်ခန်း၏ ၄ လွှာတွင် အခြားမြန်မာအမျိုးသမီး ၇ ဦးနှင့်အတူ နေထိုင်ကြောင်းနှင့် တစ်ဦးတည်း သီးသန့် နေထိုင်တတ်သူ၊ သူမ၏အခန်းတွင်း၌သာ ကွန်ပြူတာနှင့် အချိန်ကုန်ဆုံးစေသူဟု အခန်းဖော်များ၏ အဆိုအရ သိရှိရသည်။ Facebook ပေါ်၌ပင် သူငယ်ချင်း အနည်းငယ်သာရှိပြီး လတ်တလောကာလတွင်း သူမ၏လုပ်ငန်းခွင်နှင့် လူမှုဆက်ဆံရေး ကိစ္စများ တွင် အခက်အခဲများရှိနေခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ သူမ၏ချစ်သူဟောင်းသည်
လက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ နေထိုင်လျက်ရှိသည်ဟု ယူဆရပြီး သူမထံသို့လည်း မည်သည့်​ယောင်္ကျားလေး တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ လာရောက်တွေ့ဆုံဖူးခြင်း မရှိကြောင်း အခန်းဖော်များက ပြောပြခဲ့သည်။ မရင်ငြိမ်းပွင့်သည်
စင်ကာပူနိုင်ငံ နန်ယန်ပိုလီတက္ကနစ်မှ သူနာပြု ဒီပလိုမာဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး Kandang Kerbau အမျိုးသမီးနှင့် ကလေး သူငယ်ဆေးရုံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။